Wasiirka Warfaafinta oo tababbar u furay qaar kamid ah shaqaalaha W. Warfaafinta | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Wasiirka Warfaafinta oo tababbar u furay qaar kamid ah shaqaalaha W. Warfaafinta
Wasiirka Warfaafinta oo tababbar u furay qaar kamid ah shaqaalaha W. Warfaafinta
SAWIRKA TABABARKA SHAQAALAHA WASARADA WARFAADINTA
Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdi Xayir “Maareeye” ayaa maanta tababbar sare loogu qaadayo aqoontooda u furay qaar kamid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta.
Agaasimaha shaqaalaha iyo tababbarada wasaaradda mudane C/raxiin Ciise Caddow oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in qof kasta looga baahanyahay inay si daacad ah u gudato waajibaadka ka saaran u adeegista Qaranka isla markaa waxaa uu balan qaaday in la sii kordhin doono sare u qaadista tayada shaqaalaha.
Wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in ujeedka laga leeyahay aqoon kororsigaan uu yahay in aqoonta shaqaalaha kor loo qaado isla markaana la tayeeyo shaqada warbaahinta.
Wasiir Maxamed Cabdi Xayir ayaa kula dardaarmay howl-wadeennada wasaaradda in ka go’naato hormarinta waajibaadka shaqo ee Qaranku u igmaday ”qof damiirkiisu nool yahay ayaa laga rabaa Warbaahinta dowladda oo shaqada uu hayo uu ku qabto dareen iyo rabitaan”.
Maqaal horeMadaxweyne ku xigeenka Galmudug oo Guddoomiyey shir looga hadlayey amniga Galmudug
Maqaal XigaXoghayaha dowlada hoose ee baraawe oo xilka laga qaaday.